Ukusebenza kwe-facade kuhambisana kokubili emadolobheni amakhulu nasemadolobheni amancane. Ngaphezu kwalokho, ukudweba lesi sakhiwo kuyisindlela esithandwa kakhulu futhi ephumelelayo sokubuyisela izakhiwo ezindala. Ngaphezu kwalokho, lobu buchwepheshe bukuvumela ukuthi uvikele izakhiwo ezintsha emiphumeleni yezimo ezimbi. Ukudweba izigcawu zendlu akukhona nje ukuthuthukisa ukubonakala kwazo.
Abanikazi bezindlu ezinhle zakudala akufanele bakhohlwe ukuthi isimo se-facade, esingasetshenziswanga isikhathi eside, singatshela abaningi abadlulayo-ngomnikazi wendlu. Futhi mayelana nezinkampani ezisezakhiweni lapho isakhiwo se-facade singakaze senziwe khona isikhathi eside, amakhasimende angaba nomuzwa omubi. Ngakho-ke, ukulungiswa okwesikhashana nokulungiswa kwesakhiwo kufanele kwenziwe.
Ukusebenza kwezakhiwo zokudweba kuzobuyisela ukukhanya kwawo okuphelile, futhi uma kunesidingo, ushintshe ngokuphelele ubuso bendlu. Ngosizo lwabaqhubi bezimboni, ukulungiswa kwesakhiwo kungenziwa ngokushesha nangokwengeziwe ngokwezomnotho.
Ukudweba lesi sikhumba kubhekene ikakhulukazi nokukhathazeka ngezindawo ezikhonjiwe nezikhonkolo ezinezakhiwo ezimbi. Ngenxa yalokho, uthuli, umswakama, i-microflora kanye nokungcola akukwazi ukungenela ezintweni.
Izimo ezingavumelekile zemvelo kanye nemiphumela yesikhathi eside yenkinga yemvelo kubangelwa izinqubo ezingonakaliseki ezingonakali ezilimaza izindonga zesakhiwo.
Ukudweba lesi sakhiwo ngeke kuvuselele ukubukeka kwayo kuphela, kodwa kubuye kuwuvikele. Ngesikhathi esifanayo, kungcono ukubeka lo msebenzi ukulungisa isicabha kubachwepheshe, ngoba ukudweba okungekho emthethweni kwezingqimba ngeke kusize ukugcina isakhiwo ngendlela efanele iminyaka eminingi.
Ngaphambi kokuqala umsebenzi, kufanele unqume uhlobo lwendawo, futhi uhlole isimo sayo, ukuze umdwebo ungenziwa ngempumelelo kamuva. Isinyathelo esilandelayo ukukhetha izinto ezihambelana nezindawo ezizobe zidwetshiwe, ezifaneleke kakhulu kulezi zimo zezulu. Uma ngabe i-façade isivele idwetshiwe, ukudweba okusha kumele kukhethwe, kunikezwe ukuhambisana kwayo kwangaphambili.
Umklamo kufanele uqaliswe kuphela emva kokulungiswa okuningiliziwe kobuso, okufaka ukuguqulwa, ukuhlanza, ukuthobisa nokulinganisa. Lokhu kungadinga imishini ekhethekile.
Lapho ukwakhiwa kwezingqimba zezindlu, kufanele kukhunjulwe ukuthi ubuso bezindonga ezidwetshiwe kumele kube omile. Ngakho-ke, akuvumelekile ukwenza umsebenzi ngesikhathi noma ngemva kwemvula. Futhi, akunakwenzeka ukudweba izindonga ngesimo sezulu esishisayo, ngaphansi kwethonya elangeni eliqondile.
Umdwebo ophezulu wekhwalithi, ukuqina kwawo nombala ngokuqondile kuxhomeke emgqeni osetshenzisiwe. Izinto ezisetshenziselwa ukudweba, zihlukaniswe zibe yi-acrylic, silicate, njll. Ama-dyes asetshenziswa kakhulu kunazo zonke.
Izinzuzo zabo eziyinhloko zikhona eqinisweni lokuthi ukudweba kwe-acrylic akudluli umswakama ngaphandle futhi ngesikhathi esifanayo asivumeli umswakama ukuba uqhume, okuyizingxenyeni zezindonga ezivuthayo. Amapende e-Acrylic, adalwe ngesisekelo samanzi, futhi futhi ngosizo lwezinhlayiya eziphilayo zingasetshenziswa ukudweba izindonga zangaphandle.
Retrocalcaneobursitis: ekwelapheni amakhambi abantu